Let's talk about IT: TCP နဲ့ UDP ဘာကွာ လည်း ?
TCP နဲ့ UDP ဘာကွာ လည်း ?
TCP နဲ့ UDP ဘာကွာ လည်း ? အလုပ်ထဲမှာ NLB အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ပြောဖြစ်တယ် ။ TCP က destination အတိအကျကို လာပြီး ၊ UDP က broadcast ပုံစံသွားတယ်လို့ ထင်နေတယ့် သူတွေ တွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ UDP မှာ Dest အမှန်က pick-up လုပ်၊ မဟုတ်တယ့်သူတွေ က drop တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ Hub နဲ့ Switch ကွာပုံနဲ့ ရောနေတယ်ထင်တယ်။ Tech engineer တွေနဲ့ပြောတာမဟုတ်လို့ (ကျနော်တို့ PM နဲ့ senior software eng တစ်ယောက်ပါ)၊ non-technical ပုံစံပဲပြောဖြစ်တယ်။
တစ်ခုက ကျနော် severfault မှာဖတ်ဖူးတယ့် CEO level explanation ။ ဆိုကျပါတော့၊ CEO က စာရွက်သုံးရွက်ကို လုံးပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို ပြစ်ချင်တယ်။ စာရွက်သုံးရွက်က သူပို့ချင်တယ့် data ( packets) ပါ။ CEO ကြီးက source ၊ အမှိုက်ပုံးက destination ပေါ့။ ဘယ်လိုပြစ်မလည်းဆိုတယ့် manner က TCP / UDP ပါပဲ။ TCP လိုပြစ်ရင်တော့ ပထမ တစ်ရွက်ပြစ်တယ်၊ ဝင်မဝင်ကြည့်တယ်၊ ဝင်ရင် နောက်တစ်ရွက်ထပ်ပြစ်တယ်။ ပြုတ်ကျသွားရင်တော့ ( ထကောက်ပြီးတော့) နောက်တစ်ခါထပ်ပြစ်တယ်။ အဓိကက စာရွက်သုံးရွက်လုံး အမှိုက်ပုံးထဲဝင်တာ သေချာဖို့ စနစ်တကျပြစ်တယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ UDP ဆိုရင်တော့ တစ် နှစ် သုံး ဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးရှိမယ့်ဘက်ကို အကုန်ပြစ်လိုက်မယ်၊ ဝင်တာမဝင်တာ ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ မဝင်လည်းနေပါစေပေါ့။
CEO level က အရမ်း briefly ဖြစ်နေတယ်။ နောက် example တစ်ခုပြောမယ်။ We should call it "Project manager level explanation" လို့ပြောတော့ PM က မျက်ထောင့်နီနဲ့ကြည့်တယ်။
ကျနော်တို့ စာတစ်စောင် ပို့မယ်ဆိုပါတော့။ စာက Data ၊ ကျနော်က source ၊ ကျနော်ပို့ချင်တယ့် လိပ်စာက Destination ပေါ့။ ဘယ်လိုပို့မလည်း ( transmission method ) နှစ်ခုရွေးစရာရှိမယ် ။ DHL နဲ့ ပုံမှန် unregistered post mail ပေါ့။
DHL နဲ့ပို့တယ်ဆိုပါတော့ ၊
1. DHL က အိမ်ရှေ့ကိုရောက်အောင်လာမယ် ( route)
2. အိမ်တခါးကို လာခေါက်မယ် (3way hand-shake)
3. ဒီ address မှာ ဒီစာကို လက်ခံနိုင်ကြောင်း သေချာမှ
4. စာကိုပေးပြီးရင်လည်း လက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ် ( Acknowledgement)
5. တကယ်လို့ လက်ခံမယ့်ဘက်က လူမရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လက်ခံဖို့အရမ်းအလုပ်တွေရှုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပို့မယ် ( transmission control, windowing)
6. ဒီလိပ်စာက ဒီလူမရှိတော့တာမျိုး၊ လိပ်စာမှားနေတာမျိုးဆို sender ကိုပြန် အကြောင်းကြားမယ်။
Sender ဖက်က ပို့လိုက်တာ ရောက်မရောက် သိနိုင်မယ် ၊ လိုအပ်ရင် နောက်တစ်ခေါက် ၊ နောက်တစ်နေရာ ပို့ဖို့လိုအပ်ရင် လည်းသိရမှာပေါ့။
Unregisterd post mail ဆိုရင်တော့
1. အိမ်အောက်က mailbox ကိုလာမယ် ( route)
2. စာတိုက်ပုံးထဲ ထဲခဲ့မယ်
လက်ခံရမယ့်လူ အိမ်ပြောင်းသွားလို့ သူလက်ထဲမရောက်လည်း တာဝန်မယူဖူး။ ရောက်လားမရောက်လားလည်း မသိနိုင်ဘူး။
ဒီ example မှာ connection less နဲ့ connection oriented ပုံစံကို ထဲ့မပြောနိုင်ပေမယ့် နှစ်ခုလုံးက destination ကိုသိပြီး destination ကိုပဲရောက်အောင်လာကြတာပါပဲ။ Transmission control ပါတာနဲ့ မပါတာပဲ အဓိကကွဲတယ်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။
Technical engineer ကိုဒါမျိုးပြောလို့ မရနိုင်ပေမယ့် ၊ ဘာမှန်းမသိ စွတ်ပြောတတ်တယ့် သူဌေးတွေ ( PM တွေရောပေါ့) အတွက်တော့ သူတို့ညာဏ်နဲ့ လိုက်မှီတယ့် explanation ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် :D ။
စာမရေးတာကြာပြီ ၊ ဘာမှ မလုပ်တာကြာပြီ ။ တစ်ခုခုသေခြာပြန်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး တခြား colleague တစ်ရောက်စီကနေ သူ download လုပ်ထားတယ့် game အသစ်တွေ 36 GB ဒီနေ့ copy လုပ်လိုက်ပါတယ် ။
Posted by Divinity at 1:42 AM
Labels: Divinity, networking
Game ဆော့တာနဲ့တင် laptop ကအရင်းကြေလောက်ပြီ။
မနေ့က productive programmer ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ရင်း အဲဒီလူက ဘာမဆို command line နဲ့ပဲရိုက်တာ အမြန်ဆုံးပဲဆိုလို့ ဘာ စရိုက်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားရင်း ဒီမှာ comment လာရေးနေလိုက်တယ်။
မြန်မာပြည် မပြန်ခင် Kallang မှာစကိတ်လာစီးဦးမယ်။
ဒါမှ ပြန်သွားရင် သွားအတုတပ်ရလွယ်မယ်လေ။